एसियाली खेलकुद सम्पन्न, कुन कुन देशले हात पारे पदक ? - एसियाली खेलकुद सम्पन्न, कुन कुन देशले हात पारे पदक ?
एसियाली खेलकुद सम्पन्न, कुन कुन देशले हात पारे पदक ?
२०७५, १७ भदौ, 12:59:46 PM
काठमाडौं । १५ दिन लामो एसियाली खेलकुदको महामेला एसियाली खेलकुदको १८औं संस्करण इण्डोनेसियाको जाकार्ता र पालेङवाङमा आजदेखि सकिएको छ ।
गएको भदौ २ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताले एसियाली क्षेत्र खेलकुदमय बन्यो । एसियाका सबै ४५ मुलुकबाट गरी ४९ खेलमा करिब १० हजारको संख्यामा खेलाडीहरु इण्डोनेसियामा भेला भए । नेपालबाट पनि २९ खेलमा १८७ खेलाडी इण्डोनेसिया पुगे ।
सहभागी ४५ मुलुकमध्ये ३७ मुलुकले पदक जित्न सके भने आठ मुलुक रित्तो हात फर्कनुपर्यो । प्याराग्लाइडिङले रजत जितेपछि नेपाल पनि पदकविहीन हुनबाट जोगियो ।
एसियाली खेलकुदमा चीनले सबैधन्दा धेरै पदक जित्न सफल भयो । जुन अपेक्षाकृत नै थियो । किनभने चीन पछिल्लो ११ संस्करणदेखि पदकतालिकामा शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ । सन् १९८२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एसियाली खेलकुददेखि चीन एसियाली खेलकुदमा दोस्रो हुनुपरेको छैन ।
चीनले इण्डोनेसियामा १३२ स्वर्ण, ९२ रजत र ६५ कास्य गरी २८९ पदक जित्न सफल भयो । दोस्रो भएको जापानले ७५ स्वर्ण, ५६ रजत र ७४ कास्य गरी २०५ पदक जित्यो ।
दक्षिण कोरिया र इण्डोनेसिया क्रमसः तेस्रो र चौथो भए । कोरियाले ४९ स्वर्ण, ५८ रजत र ७० कास्य गरी १७७ पदक जित्दा आयोजक इण्डोनेसियाले ३१ स्वर्ण, २४ रजत र ४३ कास्य गरी ९८ पदक जित्यो ।
२१ स्वर्ण, २४ रजत र २५ कास्य जितेको उज्वेकिस्तान पाँचौं हुँदा २० स्वर्ण २० रजत र २२ कास्य जितेर इरान छैटौं भयो । त्यस्तै १७ स्वर्ण, १९ रजत र ३१ कास्य जितेको चाइनिज ताइपेइ सातौं स्थानमा आयो ।
छिमेकी मुलुक भारत एसियाली खेलकुदमा आठौं भयो । उसले १५ स्वर्ण, २४ रजत र ३० कास्य जित्न सफल भयो । समान १५ स्वर्ण जितेको काजाख्स्तान नवौं हुँदा १२ स्वर्ण जितेको उत्तर कोरिया दशौं भयो ।
भियतनाम सिंगापुर र फिलिपिन्सले समान चार चार स्वर्ण जिते भने युएई र कुवेतले समान ३–३ स्वर्ण जित्न सफल भए । कीर्गिस्तान, जोर्डन र कम्बोडियाले दुई–दुई स्वर्ण जिते । पाँच मुलुकले एक एक स्वर्ण जिते । साउदी अरव, मकाउ, कोरिया र लेबनानको नाममा एक–एक स्वर्ण रह्यो ।
एसियाली खेलकुदमा सहभागिता भएकामध्ये चार मुलुकले कास्य पदकमात्र जित्न सके । जसमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यानमार र सिरिया छन् ।